EVY's Kitchen: July 2010
Posted by Evy at 1:54 PM 1 comment:
ကြက်တောင်ပံအစာသွပ်(Stuff Chicken Wings with Ginger-Garlic Sauce )
ဒါဝတ်ရည်ရဲ့နည်းနဲ့လုပ်ထားတဲ့ ကြက်တောင်ပံ အစာသွပ်ပါ။ လုပ်ရတာလဲလက်ဝင် စားလို့လည်း အရမ်းကောင်းပါတယ် ၊လုပ်နည်းအတွက် ၀တ်ရည်ကို ကျေးဇူးအထူး။ လုပ်နည်း ကိုတော့ ၀တ်ရည်သေချာရေးပြထားတာမို့ ဗမာလိုထပ်မရေးတော့ပါဘူး။ ဒီမှာ ဘဲကြည့်လိုက်ပါနော်
**ကြက်တောင်ပံ တစ်ခုလုံးမသုံးပဲ mid joint လေးတွေပဲမို့လို့ အဲလို တုံးတိတိလေးတွေဖြစ်နေတာ :D
This delicious recipe is from one of my blogger friends andabig thank to her for sharing suchayummy recipe. Really love it. The detail steps are written in her blog (but in Burmese) . Since this dish is so so nice, I shall translate it into English for our non Burmese friends.
2 teaspoon of seasoning powder (chicken flavour)
Remove the bone from wings (carefully not to tear out the skin) and marinate with above ingredients. Set it aside.
Now we are going to prepare the ingredients to stuff inside.
4 Tbsp of minced chicken meat.
1 medium size carrot (minced)
2 Tbsp of mince green bean
Mix all the ingredients and stuff inside the chicken wings. About2Tbsp per wing. Then steam it for about 10mins. Coat with bread crumb and pan fry them till golden brown. Arrange them on serving plate.
We are going to prepare the sauce now.
Heat up oil in pan. Fry ginger and garlic for about 2-3 mins. Add in the rest of the ingredients (except corn flour) and leave it to boil. Let the corn flour dissolve inatable spoon of water and add it in as well. Let the gravy thickenalittle bit and it's now ready. Pour the gravy onto the wings (in serving plate) and that's done. Very delicious and this definitely isakeeper for me.
Posted by Evy at 8:38 PM 1 comment:
မနေ့ကလုပ်ဖြစ်တဲ့ black forest cake ပါ။
ထောပတ်နဲ့ Cocoa ကို ရောမွှေထားပါ
နို့နဲ့ flour mixture (၄) ထည့်ပေးပါ၊ သမအောင် ဖြေးဖြေးမွှေပါ။ အရမ်းမွှေလို့မရပါ။
နံပါတ် ၅ ရဲ့ တ၀က်ကို နံပါတ် (၁)ထဲထည့်ပြီး သမအောင် မွှေပေးပါ။ ပြီးမှကျန်တာကို ဆက်ထည့်ပြီးမွှေပါ။
မုန့်အအေးခံတုန်း cream နဲ့ dark pitted cherry ကိုပြင်ပါမယ်။
Dark pitted cherry ဗူးတ၀က်ကို syrup နဲ့အတူ မီးပေါ်မှာ ၁၅ မိနစ်ကျိုပေးပါ။ ပြီးရင် အအေးခံပြီး modified startch ၁ ဇွန်းလောက်ရောမွှေပေးလိုက်ပါ။
မွှေစက်ထဲမှာ non dairy whipping cream 1 cup ကို ထည့်ပြီး cream ဖြစ်တဲ့အထိမွှေပေးပါ။ ၅ မိနစ် လောက်ကြာပါမယ်။
အအေးခံပြီးသားကိတ်ကို horizontally တ၀က်ဝက်လိုက်ပါ။
ပထမဆုံးအလွှာကို မုန့်တင်တဲ့ board ပေါ်မှာတင်
ပြီးရင် Sugar Syrup ( 1 tbsp of sugar &2tbsp of water , boiled and leave it to cool) ကို စုတ်တံလေးနဲ့ ပထမအလွှာပေါ်သုတ်ပေးပါ
ပြီးရင် cream ထည့်။ dark pitted cherry ထည့် ၊ cream ထပ်ထည့် ၊ မျက်နှာပြင်ညှိ
နောက်ကိတ်တလွှာခင်း။ sugar syrup ထပ်သုတ်။ ပြီးမှ Cream ကို ကိတ်တစ်ခုလုံးဖုံးအောင် သုတ်ပြီး မျက်နှာပြင် ညှိပေးပါ။
ပြီးမှ Choco rice ၊ အသီးခြောက်တွေနဲ့ အလှဆင်ပါ
မစားခင်ရေခဲသေတ္တာထဲမှာ ၂ နာရီ အနည်းဆုံးထားပေးပါ။
Posted by Evy at 1:39 PM4comments:
Posted by Evy at 9:45 PM3comments:
Posted by Evy at 4:33 PM3comments:
ဒါဒုတိယ တစ်ခါလုပ်တဲ့ ကြက်သားကောက်ညှင်းထုပ်ပါ။အရမ်းကြိုက်ပေမယ့် ခဏခဏတော့လုပ်မစားဖြစ်ပါ။ ပြီးခဲ့တဲ့ တစ်ခေါက်လုပ်စားပြီးကတည်း မလုပ်လိုက်တာ ခုထိပါဘဲ။ လုပ်နည်းအပြည့်အစုံကိုအောက်မှာရေးပေးထားတယ်နော်။ စိတ်ဝင်စားရင် စမ်းကြည့်ပါလား။
-ကောက်ညှင်းဆန် ၂ ဘူး (rice cooker ထဲကပါတဲ့ဘူးနဲ့နော်) နဲ့ black mushrooms ကို ညထဲကရေစိမ်ထားပါ။ မနက်မှရေစစ်ပြီး ကောက်ညှင်းကို rice cooker ထဲကအံလေးပေါ်မှာ မိနစ် ၃၀ ခန့် ပေါင်းပေးပါ။ကောက်ညှင်းပေါင်းနေတုန်းမှာအဆ
-ကြက်အူချောင်း ၂ချောင်းကို မထူမပါးလှီးထား။ black mushrooms ကို လှီးထား။ ကြက်သားကို ခရုဆီ၊ဆား၊ငရုပ်ကောင်း၊သကြား၊ပဲငံပြာရည်အကြည်၊ cooking wine၊ကော်မှုန့်နဲ့နယ်ထား။
-ကြက်သွန်နီ အကြီး၂ဥကိုသေးသေးစိတ်ပြီးဆီသတ်ပါ။ပြီးရင် ကြက်သား၊မှို၊ကြက်အူချောင်းထည့် ပြီး ကြက်သားကျက်တဲ့အထိကြော်ပါ။
mixing sauce(ပေါင်းထားတဲ့ကောက်ညှင်းဆန် နဲ့ နယ်ရန်)
- ခရုဆီ စားပွဲဇွန်း ၂ ဇွန်း
-ပဲငံပြာရည် အကြည် စားပွဲဇွန်း ၂ ဇွန်း
-ပဲငံပြာရည် အနောက် စားပွဲဇွန်း ၁ ဇွန်း
-cooking wine စားပွဲဇွန်း ၂ ဇွန်း
-သကြား စားပွဲဇွန်း ၂ ဇွန်း
-ဆား လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ဇွန်း
-နှမ်းဆီ လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ဇွန်း
mixing sauce ထဲမှာပါတဲ့ပစ္စည်းတွေကို အကုန်ရောမွှေပြီး ပေါင်းထားတဲ့ကောက်ညှင်းထဲကိုထည့်နယ်ပေးပါ။ ပြီးရင် aluminium ပုံစံခွက်လေးထဲကို ခုနကမှို၊ကြက်သားကြော်ကို အရင်ထည့်၊ ပြီးမှ နယ်ထားတဲ့ ကောက်ညှင်းကို အပေါ်ကထပ်ထည့်ပြီး မိနစ်၂၀လောက်ထပ်ပေါင်းပေးပါ။ အဲဒါဆိုရင်စားလို့ရပါပြီ။
Posted by Evy at 7:14 PM7comments:
Posted by Evy at 9:45 PM5comments:
တနေ့ည ၉ နာရီလောက်မှာ မုန့်လုပ်စားချင်တဲ့ စိတ်ပေါ်လာတာနဲ့ မြန်ပြီးလုပ်ရလွယ်တဲ့ scones လေးတွေလုပ်စားဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခါတစ်လေဒီလိုပါဘဲ စိတ်ကူးပေါက်ရင်ပေါက်သလို ည၁၀နာရီလောက်မှာမှ မုန့်ထလုပ်ဖြစ်တာတွေလည်းရှိပါတယ်။ မုန့်လုပ်တာက လည်း mood ၀င်မှ လုပ်လို့ကောင်းတာမဟုတ်လား။ မယုံမရှိပါနဲ့။ သူလည်းစာကျက်သလိုပါဘဲ။ ကဲပါလေ အဲဒါနဲ့ဘဲ မုန့်လုပ်စားဖြစ်တယ်ဆိုပါတော့။ ၁နာရီအတွင်းမှာပဲ မုန့်လုပ်ပြီးသွားပါတယ်။ အမှန်မှာ oven ကြီးကြီးသာဆိုရင် အဲလောက်တောင်မကြာပါဘူး။ အိမ်က oven ကသေးတော့ ၃ခါ ခွဲလုပ်နေရလို့ ကြာသွားတာပါ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် မုန့်ဖုတ်ပြီးသွားရင်တော့ ပျော်တာတော့ အမှန်ပါဘဲ။
Cake Flour - 200g
Castor Sugar -21/2 tea spoon
ဂျုံ/ပွဆေး/ဆားကို ဇကာ စစ်ထားပါ။
ထောပတ်ကို လေးထောင့် အတုံးသေးသေးလေးတွေတုံးပြီး ခုနက ဂျုံအရောထဲကို ထည့်ပေးပါ။ ထောပတ်က အေးရပါမယ်။ ပြီးရင် ခက်ရင်းလေးနဲ့ ဂျုံနဲ့ ထောပတ်ခဲလေးတွေရော ပြီး အဖတ်အဖတ်လေးတွေဖြစ်လာတဲ့ အထိ သမအောင် မွှေပေးပါ။ ထောပတ်ပျော်လို့မရပါ။ ပျော်ခါနီးဆိုရင် ရေခဲသေတ္တာ ထဲကို ၅ မိနစ်လောက်ပြန်ထည့်ပြီး မှ ဆက်မွှေပါ။
ပြီးရင် နို့ထည်ပြီး သမအောင်မွှေပေးပါ။ ဂျုံကို ခဏတော့ နယ်ပေးရပါမယ်။ အရမ်းတော့ မကြာပါစေနဲ့ ။ ကြာရင်မာသွားပါလိမ့်မယ်။ 30sec လောက်ဆိုရပါပြီ။ ရိုးရိုး ဂျုံမှုန့်ဆိုရင်တော့ 10sec လောက်ပဲနယ်ပေးပါ။
ပြီးရင် cutter နဲ့ဖြတ် ပြီး ၁၉၀ ဒီဂရီ မှာ ၁၃-၁၅ မိနစ်လောက်အထိဖုတ်ပေး ရင်ရပါပြီ။
ထောပတ် နဲ့ ဂျုံအရော မနယ်ခင်
Posted by Evy at 11:44 AM No comments:
ဆေးဘဲဥသုပ်၊ ကိုယ်တိုင်သုပ်တဲ့လက်ရာတော့ မဟုတ်ပါ။ ယောင်းမ လက်စွမ်းပြထားတာပါ။ ဂျင်းနဲနဲ နဲ့ ကြက်သွန်ဖြူကိုထောင်းထည့်ထားတာမို့ အနံလေးလည်မွှေးပါတယ်။ ကိုယ့်ဘာသာကို သုပ်တဲ့ ဆေးဘဲဥဆို မလှမပနဲ့ မို့လို့ blog ထဲမှာလည်းမတင်ဖြစ်ပါ။ ခုတော့ decoration ကလည်း လှ အရသာလေးလည်း ကောင်းတာမို့ share လုပ်လိုက်ပါတယ်။
-ဆေးဘဲဥ ၃လုံး (ခပ်ကြီးကြီးလေးစိပ်ထားပါ)
-ဂျင်းနဲ့ ကြက်သွန်ဖြူနဲနဲ ကိုညက်နေအောင်ထောင်းထား
-ခရမ်းချဉ်သီး တစ်လုံး (ခပ်ပါးပါး အ၀ိုင်းလှီးထားပါ)
-ကြက်သွန်ဖြူဆီချက် - စားပွဲဇွန်းတစ်ဇွန်းခန့်
-ဆေးဘဲဥ၊ မြေပဲထောင်း၊ ဆီကျက် ထည့်။ ပဲငံပျာရည် အကြည်ထည့်ပြီးရင် နယ်စားဖို့ အသင့်ဖြစ်ပါပြီ။
Posted by Evy at 4:57 PM3comments:
Labels: Burmese Food, Eggs, Main Dish